१० सबैभन्दा सुन्दर फूल फुल्ने रुखहरु | सबै रूखहरू
फूल फुल्ने रूखहरू
मोनिका सान्चेज | 06/04/2022 10:56 | जिज्ञासा
यद्यपि अधिकांश रूखहरू फूल्छन्, ती सबैमा साँच्चै आकर्षक र सजावटी फूलहरू छैनन्। तर म यहाँ कुरा गर्न गइरहेको प्रजातिको मामला होइन। र त्यो हो यदि तपाईं आफ्नो बगैंचामा विशेष रुचिको बिन्दुहरू सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो अत्यधिक ध्यान आकर्षित गर्ने एक वा धेरै बिरुवाहरू राख्न सिफारिस गरिन्छ। वर्षको कुनै बिन्दुमा।
हो, दस सबैभन्दा सुन्दर फूलका रूखहरू छनौट गर्न यो अलि गाह्रो छनिस्सन्देह, हामी प्रत्येकको आफ्नै स्वाद र प्राथमिकताहरू छन्। जे भए पनि, म विश्वास गर्छु कि मैले चयन गरेको कम्तिमा तपाईलाई उत्सुक हुनेछ।
1 जापानी चेरी (प्रुनस सेरुलाटा)
2 Kousa dogwood (कोर्नस kousa)
3 फ्लाम्बोयान (डेलोनिक्स रेजिया)
4 Roseate guayacán (Tabebuia rosea)
6 गोल्डेन शावर (Laburnum anagyroides)
7 म्याग्नोलिया वा म्याग्नोलिया (Magnolia Grandiflora)
8 मेट्रोसाइडेरोस एक्सेल्सा
9 PEAR (Pyrus communis)
10 थन्डरर (टेकोमा स्ट्यान्स)
जापानी चेरी (प्रुनस सेरुलाटा)
छवि - विकिमेडिया / मायराबेला
El जापानी चेरी यो यस प्रकारको सूचीमा प्रायः समावेश गरिएको मध्ये एक हो, र राम्रो कारणको साथ: जब यो फुल्छ, वसन्तको सुरुमा केहि गर्छ, यसको हाँगाहरू पूर्ण रूपमा यसको फूलहरूले लुकाउँछन् जुन गुलाबी वा सेतो हुन सक्छ र व्यासमा दुई सेन्टिमिटर बढी वा कम मापन गर्न सकिन्छ।
यो पातलो बिरुवा हो जुन6मिटरको उचाइमा पुग्छ र व्यासमा4मिटर सम्मको चौडा मुकुट विकास गर्दछ। यसले चिसो, शीत र हिमपातलाई राम्रोसँग प्रतिरोध गर्दछ; वास्तवमा, यो केवल समशीतोष्ण हावापानीमा बस्न सक्छ, चार मौसमहरू राम्ररी फरक छ।
कौसा डगवुड (cornus koussa)
छवि - विकिमेडिया / फामार्टिन
El kousa dogwood, वा जसरी म यसलाई कल गर्न चाहन्छु, रूख डगवुड, पातलो रूख हो जुन लगभग 10 मिटरको उचाइमा पुग्छ। जब यो फूल्छ, वसन्तमा, यो जीवित तमाशा हुन्छ: यसका फूलहरू सेतो हुन्छन् र करिब ५ सेन्टिमिटर चौडा हुन्छन्, र तिनीहरू धेरै संख्यामा अंकुरण भएकोले, तपाईं पक्कै पनि तिनीहरूको तस्वीर लिन चाहानुहुन्छ।
अब, यद्यपि यसले मध्यम फ्रस्टलाई राम्रोसँग सहन सक्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो अम्लीय माटोमा रोप्नु पर्छ, किनकि क्षारीय माटोमा फलामको कमीको कारणले यसलाई सामान्य रूपमा बढ्न धेरै समस्या हुनेछ।
फ्लाम्बोयान (डेलोनिक्स रेजिया)
छवि - फ्लिकर/जार्डिन बोरिकुआ
El तेजस्वी यो एक रूख हो जुन मौसममा निर्भर गर्दछ सदाबहार / पातलो, वा अर्ध-पर्णपाती हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि तापक्रम उच्च रहन्छ र यो नियमित रूपमा वर्षा हुन्छ भने, यसले वर्षभरि यसको पातहरू अलि-अलि हराउनेछ, तर यदि कुनै बिन्दुमा तापमान 15ºC भन्दा तल झर्छ र / वा धेरै कम वर्षा हुन्छ भने, त्यसपछि यो पूर्ण वा आंशिक रूपमा हराउनेछ। यसको पातहरू। यसको पातहरू। तर हो, वसन्तमा यो फुल्नेछ, र यसले रातो वा सुन्तला फूलहरू उत्पादन गर्नेछ (विविध मा Delonix regia var flavida).
यो एक रूख हो जुन 12 मिटरको उचाइमा पुग्छ र सामान्यतया छाता मुकुट विकास गर्दछ, जसको व्यास6मिटर सम्म मापन गर्न सकिन्छ। यो चिसो प्रति धेरै संवेदनशील प्रजाति हो; वास्तवमा, यदि यो 10ºC भन्दा तल खस्छ भने, यसलाई सुरक्षा चाहिन्छ।
गुलाबी गुआइकान (Tabebuia गुलाबा)
छवि - फ्लिकर/फिल
El गुलाबी guayacan वा गुलाबी लापाचो एक पातलो रूख हो जुन 15-25 मिटरको उचाइमा पुग्छ। यसमा केही हदसम्म पिरामिडल कप छ, फराकिलो आधारको साथ जुन लगभग4मिटरसम्म पुग्छ। फूलहरू, जुन गुलाबी हुन्छन्, वसन्तमा खिल्छन्, र त्यसलाई प्यानिकल भनिन्छ। फूल फुल्ने बित्तिकै तिनीहरू सुक्छन्।
यो उष्णकटिबंधीय बगैंचामा बढ्नको लागि धेरै रोचक प्रजाति हो। यसले चिसोलाई प्रतिरोध गर्दैन, तर यसलाई दुई मौसम चाहिन्छ: एक वर्षा, र अर्को जहाँ यो कम वर्षा हुन्छ।
ज्याकारान्डा (जकार्डा मिमोसिफोलिया)
El जाकिरन्डा वा jacaranda एक पातलो रूख हो जुन 12-15 मिटरको उचाइमा पुग्छ, र 4-5 मिटर चौडा चौडा र घने चन्दवा विकसित गर्दछ। यसका पातहरू बिपिननेट र हरियो हुन्छन्, र यो वसन्तमा फुल्ने बिरुवा हो। जब यो हुन्छ, असंख्य लिलाक फूलहरू बिरुवाबाट, फूलका डाँठहरूबाट निस्कन्छन्।
यो न्यानो र हल्का मौसममा धेरै राम्रोसँग बस्छ, कमजोर जाडो फ्रस्टको साथ। र यो आराम मा जान, र यसको पातहरु छोड्न एक सानो चिसो खर्च गर्न आवश्यक छ कि छ।
सुनको वर्षा (Laburnum anagyroides)
छवि - विकिमीडिया/सोलिप्सिस्ट~commonswiki
रुख ल्लुभिया डे ओरो यो7मिटरको उचाइमा पुग्ने एक पतनकारी बोट हो, र यसले धेरै ठाउँ लिदैन; वास्तवमा, यसलाई साना बगैंचामा र ठूला भाँडोहरूमा पनि राख्न सकिन्छ, यद्यपि यस अवस्थामा यसलाई नियमित रूपमा छाँट्नु आवश्यक हुनेछ। यसको फूललाई ​​के भन्नु? तिनीहरू वसन्तमा अंकुर्छन्, र झुण्डिएको पहेंलो गुच्छाहरूमा समूहबद्ध हुन्छन्।
तर अरू धेरै रूखहरू जस्तै, यसलाई बढ्न अम्लीय माटो चाहिन्छ। हावापानी समशीतोष्ण हुनुपर्छ, जाडोमा फ्रस्ट हुन्छ।
म्याग्नोलिया वा म्याग्नोलिया (म्याग्नोलिया ग्रान्डिफ्लोरा)
छवि - विकिमीडिया/स्टानिस्लाव क्रुपिन्स्की
तस्विर – इयानारे सेवी
La सामान्य म्याग्नोलिया यो ठूला बगैंचामा रोप्न र पृथक नमूनाको रूपमा राख्नको लागि धेरै रोचक सदाबहार रूख हो। यो 30 मिटर वा अझ बढीको उचाइमा पुग्छ, र केहि हदसम्म पिरामिड मुकुट विकसित गर्दछ जसको आधार लगभग5मिटर मापन गर्दछ। यसको फूलहरू समान रूपमा ठूला हुन्छन्: 30 सेन्टिमिटरसम्म चौडा, तिनीहरू पनि सेतो र गन्ध अद्भुत छन्।। सबैभन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यसले तिनीहरूलाई उत्पादन गर्दछ जब यो जवान छ (मसँग एउटा नमूना छ जुन फूल्न थाल्यो जब यो 1,5 मिटर अग्लो थियो)।
तर हो, यो एक प्रजाति हो जुन अम्लीय वा थोरै अम्लीय माटोमा मात्र बढ्छ। यदि तपाईंसँग माटोको माटो छ भने, तपाईंसँग फलामको कमीको कारणले गम्भीर क्लोरोसिस समस्या हुनेछ। तर अन्यथा, यो एक बिरुवा हो जसले न्यानो र शीतोष्ण मौसममा राम्रो गर्छ, मध्यम फ्रस्टहरू पनि सामना गर्न सक्षम छ।
छवि - विकिमीडिया/Ed323
El मेट्रोसाइडेरोस एक्सेल्सा यो एक प्रभावशाली सदाबहार रूख हो, जुन 7-15 मिटरको उचाइमा पुग्छ र6मिटर वा बढी मापन गर्न सक्ने धेरै, धेरै चौडा मुकुट विकास गर्दछ। यो बिरुवा को बारे मा रोचक कुरा यो छ जब यो फूल्छ, जुन यसले गर्मीमा गर्छ, यसले ठूलो मात्रामा रातो फूलहरू उत्पादन गर्दछ जसले यसलाई टाढाबाट रातो "स्थान" जस्तो देखिन्छ।
थप रूपमा, यसले चिसोलाई समर्थन गर्दछ, तर यसलाई चिसोबाट जोगाउन सल्लाह दिइन्छ, विशेष गरी यदि यो मध्यम छ। कमजोर र समयनिष्ठ व्यक्तिहरूले केही क्षति निम्त्याउन सक्छ, तर यो हावाबाट आश्रय भएमा यो धेरै गम्भीर हुनेछैन।
नाशपातीको रूख (पाइरस कम्युनिस)
छवि - फ्लिकर/इन्गे नफ
त्यहाँ धेरै फलफूल रूखहरू छन् जुन सजावटको रूपमा पनि सेवा गर्दछ। ती मध्ये एक नाशपातीको रूख हो, एक पतनकारी बोट जुन 20 मिटरको अधिकतम उचाइमा पुग्छ। यो वसन्तमा खिल्छ, यसको फूलहरू सेतो वा सेतो-गुलाबी हुन्छन्।, र लगभग3सेन्टिमिटर चौडा मापन। जब तिनीहरू परागकित हुन्छन्, फलहरू पाक्छन्, अर्थात्, नाशपाती, जुन तपाईलाई थाहा छ, खान योग्य छन्।
यो समशीतोष्ण हावापानीमा बस्न सक्छ, जसमा चार ऋतुहरू फरक हुन्छन्। यो एक बिरुवा हो जसले 35ºC सम्मको तापक्रमलाई प्रतिरोध गर्छ (यदि तिनीहरू समयनिष्ठ छन्) र फ्रस्ट।
थन्डरर (टेकोमा स्ट्यानहरू)
छवि - विकिमीडिया/ट्रीवर्ल्ड थोक
ट्रोनाडोर वा ट्रोनाडोरा एक सदाबहार रूख हो जुन 10 र 20 मिटरको उचाइमा पुग्छ, साँघुरो मुकुटको साथ 3-4 मिटरको हुन्छ। पहेंलो, घण्टी आकारको फूलहरू उत्पादन गर्दछ (बिग्नोनियाको जस्तै) जुन वसन्तमा अंकुरिन्छ। यी धेरै आकर्षक छन्, किनकि तिनीहरू लगभग4सेन्टिमिटर चौडा हुन्छन्।
यो धेरै सुन्दर फूलहरू भएको रूख हो, तर यो केवल वर्षभरि हावापानी न्यानो ठाउँहरूमा बढ्न सकिन्छ।
तपाईलाई यी फूल फुल्ने रुख मध्ये कुन मन पर्यो?
लेखको पूर्ण मार्ग: सबै रूखहरू » जिज्ञासा » फूल फुल्ने रूखहरू
आँप (Mangifera indica)
चिनियाँ साबुनपानी (कोएलरेउटेरिया प्यानिकुलाटा)